Terms and Conditions | Burmese | BibleProject™
၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
သင်၏လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်မိပါသည်။
ကျမ်းစာပရောဂျက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်လုပ်သည့်အရာများကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှလူများနှင့် အဖွဲ့များထံ တတ်နိုင်သမျှ မျှဝေခြင်းကို ယုံကြည်ပါသည်။ အသိပညာတိုးတက်လာစေရန်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာဆွေးနွေးမှုပိုမိုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုများ၊ ပိုစတာများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် အခြးာအကြောင်းအရာများကို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆရာများအား အခမဲ့ အသုံးပြုစေလိုပါသည်။ ထို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို (တစ်ခါတရံ "စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ" ဟုသာ ညွှန်းဆိုသည်) ထိုပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများနှင့် ဂုဏ်သတင်းများအား အလွဲသုံးစားပြုခြင်း သို့မဟုတ် လွဲမှားစွာအသုံးချခြင်းမှ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးမှုများကို အသုံးပြုလိုပါက ထို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမေရိကန်ရှိ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၏ ဥပဒေများအရ ဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးအမြတ်မပါသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အား "ကျွန်ုပ်တို့"၊ "ကျွန်ုပ်တို့အား"၊ "ကျွန်ုပ်တို့၏"၊ "TBP"၊ "The Bible Project" သို့မဟုတ် "ကျမ်းစာေပရောဂျက်" ဟု ရည်ညွှန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလျှို့ဝှက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက်တို့က ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေ့ချ်များ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့် အွန်လိုင်းတွင်ရှိသည့်အခြား TBPများ ("ဝက်ဘ်ဆိုဒ်" ဟု တပေါင်းတစည်းတည်းခေါ်ခြင်း) အား သင်၏အသုံးပြုခြင်းကို အုပ်စိုးနေသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို သင်အသုံးမပြုမီ ထို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ ကျေးဇူးပြု၍ သေချာစွာဖတ်ပါ။
သင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုခြင်း
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် အကြောင်းအရာများအသုံးပြုခြင်း အပေါ်ကန့်သတ်ချက်များ
ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိရန်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ အကြောင်းအရာ (အောက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံး ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံသဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူညီလက်ခံခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုခွင့် ရမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်လက်ခံမှုသည် တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် သင်နှင့် ကျမ်းစာပရောဂျက် အကြား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် အကြောင်းအရာ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သဘောတူညီမှုအားလုံး ပါဝင်ပြီး ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရ အပြည့်အဝ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင်ပါဝင်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျင့်သုံးရန်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ထိုလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်ကို စွန့်လွှတ်သကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဤ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်များနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မေးခွန်းများ၊ ထင်မြင်ချက်များ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်မကင်းမှုများရှိပါက webmaster@jointhebibleproject.com ကို အီးမေးလ် ပို့ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း (855) 700-9109 သို့ အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိင်ပါသည်။
ကျမ်းစာပရောဂျက်သည် မည်သည့် ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းဂဏ သို့မဟုတ် အစဉ်အလာတို့နှင့် ပတ်သတ်မှုမရှိပါ။ မတူညီသောနောက်ခံအမျိုးမျိုးရှိများအနေဖြင့် မိမိ၏ဘာသာရေးခံယူချက် သို့မဟုတ် ဘာသာရေးမရှိသောခံယူချက်မည်သို့ရှိစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ပေးမှုတွင် တန်ဖိုးရှိသောအရာများ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ခရစ်ယာန်အစဉ်အလာတစ်ခုခု၏ ကွဲပြားသောသွန်သင်ချက်များကို အားပေးရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို အလေးထားသည့် သမ္မာကျမ်းစာ ဇာတ်ကြောင်းနှင့်ကဗျာကို အဓိကထားဖတ်ခြင်းဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာမည့် သီသြလော်ဂျီဆိုင်ရာဆိုလိုရင်းများနှင့် အတွေးအခေါ်များကို စူးစမ်းရှာဖွေရန် အတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာအချို့အစိတ်အပိုင်းများအား လေ့လာရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့် သီသြလော်ဂျီခံယူချက်များ ပေါ်လွင်လာခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာမှ ၎င်းတို့ကိုယ်ပြောသော ဇာတ်လမ်းနှင့် သီသြလော်ဂျီဆိုင်ရာပြောဆိုချက်များကို အရှိအတိုင်း ပြောစေရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ခြင်းအပြင် အလားတူ ထိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအမြစ်များနှင့်နည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းတွင် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေးမူကို ပြုလုပ်ရန် ကတိကဝက်ထားသောကြောင့် လူတို့က မိမိပြောလိုသောအချက်ကို သက်သေပြရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကို နောက်ခံအချက်နှင့်မဆိုင်ဘဲ တလွဲ အသုံးပြုမည်ကို အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ စိုးရိမ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေ ၎င်းတို့အသုံးပြုလျက်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းအရာမှ အကျိုးအမြတ်ရယူခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ကန့်ကွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာမှ ငွေကြးအကျိုးမြတ်ရရန်ကြိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြာင်းအရာပါ သတင်းစကားများ၊ နိဂုံးများ၊ ယူဆချက်များ သို့မဟုတ် အနှစ်သာရ တို့ကို ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုရန် ကြံစည်အားထုတ်ခြင်းသည် ဤအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာများ သင်၏အသုံးပြုခွင့် အဆုံးသတ်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဤအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် bibleproject.com၊ အလားတူ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေ့ချ်များ သို့မဟုတ် YouTubeနှင့် Vimeo Channel များ ("အကြောင်းအရာ" ဟု ပေါင်းစည်းခေါ်ခြင်း) စသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မီဒီယာမှ ထုတ်လွှင့်ခြင်းများ သင်အသုံးပြုနေသော
ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိသော ဗီဒီယိုများ၊ ပိုစတာများ၊ မှတ်စုများ၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင် နားထောင်နိုင်ရန်ထုတ်လွှင့်သည် အသံဖိုင်များနှင့် အခြားသော အော်ဒီယို မှတ်တမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါထားသည့်အတိုင်းမှတစ်ပါး အကြောင်းအရာကို အသုံးပြုရန် မဟုတ်ပါ။ အခြားကုမ္ပဏီများမှ TBP("ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ" ဟု ပေါင်းစည်းခေါ်ဆိုခြင်း) ကိုပေးသော ဟိုးစတင်းပြုလုပ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း အတိုင်းအတာရှိသလောက် ထိုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေ့ချ်များ၊ ချာနယ်များ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာပေါ်ရာ အွန်လိုင်းနေရာများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပြင် ယင်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များလည်း အကျုံးဝင်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ ရယူရန်၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရန် သို့အဟုတ် အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောမတူညီပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ပေးသော လုပ်ငန်းတို့အား သင် အသုံးပြုခွင့်ရမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် TBP၏ အစီအစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းအား ယေဘုယျအချက်အလက်များကို သင့်အားပေးသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပါက ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း သတင်းလွှာများနှင့် အခြားသောအချက်အလက်များလက်ခံရရှိခြင်း၊ အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လှူတန်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ အကြောင်းအရာ ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အခြားအင်္ဂါရပ်များကို ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့် သင်သဘောတူညီရမည်မှာ (က) သင့်မှာ TBP နှင့် သဘောတူညီချက်ချုပ်ဆိုရန် အတွက် သင့်လျော်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိရမည်၊ (ခ) သင့်၏ အချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်ရမည့်အပြင် အပြည်အစုံ ဖြစ်ရမည်၊ နှင့် (ဂ) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရယူသုံးစွဲနိုင်သော အပိုင်းများကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပေးသော အထောက်အထားကိုသာ သင်အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။ TBP သည် သင့်အား အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုမှ ယခင်ကထုတ်ပယ်ထားခဲ့ဖူးပါက သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုကို မည်သည့်အခြေအနေအောက်တွင်မဆို ရယူအသုံးပြုခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မှတ်ပုံတင်ပါက သင့်၏အကောင့်အပြင် လျှို့ဝှက်ကုဒ် (၎င်းတို့၏အတွင်းရေးကိစ္စတို့ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအပါအဝင်) နှင့် သင့်အကောင့်အား သင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုချက်မပါပဲဖြစ်စေ သူများမှအသုံးပြုခြင်းစသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက် သင့်တွင်တာဝန်ရှိပါသည်။ သင့်အကောင့်အားအသုံးပြုသော အခြားသူများသည် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာမှုရှိစေရန် သင့်အနေဖြင့်တာဝန်ရှိကြောင်း သဘောတူညီသည်။ သင့်အကောင့်အား ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်ဆုံးရှုံးကိုမဆို ကျမ်းစာပရောဂျက်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှု သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်အား ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲအသုံးပြုနေခြင်းကို သင်သိရှိပါက webmaster@jointhebible.com ကို "ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲအသုံးပြုနေခြင်း" ဟု ခေါင်းစဉ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ချက်ချင်း အီးမေးလ်ပို့ပြီး အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကြောင်းကြားလျှင်လည်း သင့်အကောင့်အချက်အလက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ငွေပေးရခြင်းအပါအဝင် သင့်အကောင့်အားအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာသောလုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးအတွက်သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သည့်အချိန်မဆို သင့်အားအကြောင်းခြင်းမရှိပဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရယူအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခုခုမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။
အကြောင်းအရာနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါရှိသောအခြားသောအချက်အလက်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ စာလုံး၊ ပုံများ၊ အသံဖိုင်ကလစ်များ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များ၊ အချက်အလက်ပြုစုထားခြင်းများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ ဒီဇိုင်းအားလုံး ("ဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်း" ဟု စုပေါင်းပြီးခေါ်ခြင်း) များအပါအဝင် ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါရှိသောအခြားသောအချက်အလက်များရှိ မူပိုင်ခွင့်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များကို TBP မှ ပိုင်သည် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရရှိထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။
အချို့အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို ဤအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ အောက်တွင် အချို့သောအသုံးပြုခြင်းအတွက်ထားသော်လည်း မည်သည့် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားလိုင်စင်ကိုမှ သင့်အား တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အမေရိကန်ဥပဒေအောက်တွင် တရားသဖြင့်သုံးစွဲခြင်းမမြောက်သည့် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ကျွန်ုပ်တို့၏ နာမည်၊ အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် အခြား TBP ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်နိုင်သည့်အရာကို သင့်အနေဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ရမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသို့ဖြင့်TBP နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းအရာ အသုံးပြုများအကြား ဆက်ဆံရေးသည် တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှ ရှုပ်ထွေးစေတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင် အကြောင်းအရာကို အသုံးပြုရုံသာပြုနေသောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်အား TBP မှ ထောက်ခံကြော်ငြာပေးသည် သို့မဟုတ် စပွန်ဆာပေးထားသည်ဟု ယုံကြည်စေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကိုးကားပြီးလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခြင်းထက် ကျော်လွန်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အမှတ်တံဆိပ်အား အသုံးပြုလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ အထူးအသုံးပြုခွင့် လိုင်စင်တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လိုင်စင်များကို ပေးနေကျမဟုတ်ပါ။ သို့သော် အထူးအခြေအနေကိစ္စရပ်များတွင် လိုင်စင်ပေးကောင်းပေးနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိအရာရှိများထဲက တစ်ယောက် လက်မှတ်ထိုးထားသော တရားဝင်ရေးသားထားသည့် လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ရမှသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်အသားများကို အသုံးပြုရန် လိုင်စင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသူ သို့မဟုတ် အေးဂျင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကို တရားဝင်အသုံးပြုခွင့် ပေးရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုခွင့်ပေးရန်ကြိုးစားမှု သို့မဟုတ် ကတိပြုမှု သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်မှုများသည်လည်း တရားမဝင်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင့်မှာ ဖျက်သိမ်းနိုင်သော၊ မလွှဲပြောင်းပေးသော၊ အထူးမဟုတ်သော လိုင်စင်ဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်းနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အားထိတွေ့နေခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖြည့်သွင်းချက်များလိုအပ်သည့် တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် (က) သင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ တင်သွင်းသော အချက်အလက်များအားလုံးသည် တိကျပြီးမှန်ကန်ကြောင်း၊ (ခ) ထိုအချက်အလက်များတိကျစေရန်အတွက် သင်ဖက်မှ ထိန်းသိမ်းကြောင်းနှင့် (ဂ) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို သင်အသုံးပြုရာတွင် သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ မည်သည့်ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းကိုမှ မချိုးဖောက်ကြောင်းတို့ကို သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံသည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည့် မည်သည့်အချက်အလက်မဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက်၏အောက်တွင် ရှိသည်။
သင်သည် မည်သည့် စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်ညိစွန်းသော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ သင်သည် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ရှင်းလင်းစွာခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အချို့အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား အသုံးပြုခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ပွားခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ခွဲဝေပေးခြင်း၊ အငှားချခြင်း၊ ပူးတွဲလိုင်စင်ပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်ရန်အတွက် သဘောတူညီသည်။ ထပ်မံပြီး သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အရာများအား ကော်ပီကူးခြင်း၊ ကူးယူပြီးအလားတူပြန်ဖန်တီးခြင်း၊ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ဆင့်ပွားပြုလုပ်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား စမ်းသပ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လိမ်လည်လုပ်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အခြားသောတရားမဝင်လုပ်ရပ်များ လုပ်ခြင်းကို တားမြစ်သည်။ ထို့အပြင် အလွဲသုံးစားလုပ်သူအား ဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ www.bibleproject.com ဆိုဒ် သို့မဟုတ် YouTube လိုင်း (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) သို့မဟုတ် Vimeo လိုင်း (https://vimeo.com/channels/1241213) သို့မဟုတ် နောင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖန်တီးမည့် အခြားလိုင်းများ("ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ" ဟု စုပေါင်းခေါ်ခြင်း) မှ တဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုအချို့ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရယူနိုင်ပါသည်။ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လင့်ခ်များတွင်မြှုပ်ဝင်နေခြင်းမှ ဖယ်ရန် မညွှန်ကြားလျှင်နှင့် ညွှန်ကြားခြင်းမရခင်အထိ သင်အား ယင်းတွင် မြှုပ်ဝင်နေခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များအတိုင်း အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူများ မရှိမဖြစ်လိုက်နာရသော လိုအပ်ချက်အရ သင်သည် အခကြေးငွေပေးချေရန် မတောင်းဆိုရပါ သို့မဟုတ် သင့်တွင် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရစေမည့် လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် မလှုပ်ရှားခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
သင်သည် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကော်ပီများကို ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းစားခြင်းမပြုလုပ်ရ။
သင်သည် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာနှင့်အနီးစပ်ဆုံးနေရာတွင် ကျမ်းစာပရောဂျက်ကို ၄င်း၏ စာရေးသူနှင့် ဗီဒီယိုပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာဖေါ်ပြရမည်။ ကြည့်ရှု့သူများသွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး
ကျမ်းစာပရောဂျက် အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန် www.bibleproject.com လင့်ခ်ကို ကြေညာချက်၌ ရှင်းလင်း ထင်ရှားစွာထားရှိရမည်။
မည်သည့် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုမှ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခြင်း မလုပ်ရဘဲ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီး မည်သည့်ဆင့်ပွားခြင်းမှ မပြုလုပ်ရပါ။
မည်သည့် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုမှ ဆာဗာအသစ်တွင်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်ထက်ပိုပြီး ထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။
YouTube ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သင်သဘောတူညီရမည်ဖြစ်သည်။
ပိုစတာများ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုစတာအချို့ကို www.bibleproject.com ဆိုဒ်မှ ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါသည်။ ("ပိုစတာ" ဟု စုပေါင်းခေါ်ယူခြင်း) သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဖက် ဤခွင့်ပြုချက်ကို မရုတ်သိမ်းသည်အထိ ကျွန်ုပ်တို့၏မည်သည့် ပိုစတာကိုမဆို ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ထိတွေ့လို့ရသော မီဒီယာများတွင်ဖြစ်စေ ဒေါင်းလုတ်ချခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ပြသခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များအတိုင်း အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်နေရမည်ဖြစ်သည်။
ပိုစတာများ ကြည့်ရှုခွင့်ရမည့် ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများဖက်မှ မရှိမဖြစ်လိုက်နာရသော လိုအပ်ချက်အရ သင်သည် အခကြေးငွေရန်တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် သင့်တွင် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရစေမည့် လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် မလှုပ်ရှားခြင်းများမပြုရသလို ပိုစတာကော်ပီများကိုရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
သင်အနေဖြင့် အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည် အရောင်းနှင့်ဆိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များကို တင်းကြပ်စွာလိုက်နာဆောင်ရွက်နေသမျှကာလပတ်လုံး မတူညီသော ပိုစတာတစ်ခုစီအတွက် စာရွက်မိတ္တူပေါင်း ၅၀၀ အထိ ဖန်တီး ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ ပိုစတာအားလုံးအား အခမဲ့ ဖြန့်ဝေရမည်ဖြစ်သည်။ (သင့်အနေဖြင့် ပိုစတာတစ်ခုကိုကော်ပီ ၅၀၀ သို့မဟုတ် ယင်း၏အထက်ကို ထုတ်လုပ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး အထူးခွင့်ပြုလိုင်စင်တောင်းနိုင်ပါသည်။)
မည်သည့် ပိုစတာကိုမှ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုများမလုပ်ရသလို ပိုစတာများကိုအခြေခံပြီး မည်သည့်ဆင့်ပွားခြင်းမှ မပြုလုပ်ရပါ။
သင်သည် ပိုစတာကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြသည့်အနီးစပ်ဆုံးနေရာတွင် ကျမ်းစာပရောဂျက်ကို ၄င်း၏ စာရေးသူနှင့် ပို့စတာပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာ ဖေါ်ပြရမည်။ ကြည့်ရှု့သူများသွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး ကျမ်းစာပရောဂျက်
အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန် www.bibleproject.com လင့်ခ်ကို ကြေညာချက်၌ ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာထားရှိရမည်။
ဤခွင့်ပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ရုပ်သိမ်းခြင်း ဖြစ်ပျက်ပါက သင့်အနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်ပြသထားသောပိုစတာများနှင့် ထိတွေ့လို့ရသော မီဒီယာများအတွက်ပြန်လုပ်ထုတ်လုပ်ထားသည် ပိုစတာများကိုပါ ဖယ်ရှားပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အခြားရုပ်ပုံနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာ ပိုစတာအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ မှတ်စုများ၊ စာသားများနှင့်
ရုပ်သေရုပ်ပုံနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာ အချို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏ www.bibleproject.com ဆိုဒ်တွင် ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါသည်။ ("အခြားရုပ်ပုံနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာ" ဟု ပေါင်းစု၍ခေါ်ခြင်း) သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့က ဤခွင့်ပြုချက်ကို မရုတ်သိမ်းမီအထိ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားရုပ်ပြပုံများကို ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ထိတွေ့လို့ရသော မီဒီယာများတွင် တစ်ခါသုံးဖြစ်စေ ဒေါင်းလုတ်ချခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ပြသခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် အောက်ပါလိုအပ်ချက်များအတိုင်း အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်နေရမည်ဖြစ်သည်။
အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများကို ကြည့်ရှုခွင့်ရသည့် ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများဖက်မှ မရှိမဖြစ်လိုက်နာရသော လိုအပ်ချက်အရ သင်သည် အခကြေးငွေတောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ် သင့်တွင် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရစေမည့် မည်သည့် လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် မလှုပ်ရှားခြင်းများ မပြုရသလို အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများကို ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
သင်သည် အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများကို ထိတွေလို့ရသော မီဒီယာများတွင် ကော်ပီအများအပြား မပြုလုပ်ရ။
မည်သည့် အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများကိုမျှ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုများမပြုလုပ်ရသလို အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများကို အခြေခံပြီး မည်သည့်ဆင့်ပွားခြင်းမှ မပြုလုပ်ရပါ။
သင်သည် အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြသရာတွင် အနီးစပ်ဆုံးနေရာတွင် ကျမ်းစာပရောဂျက်ကို ၄င်း၏ စာရေးသူနှင့် အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစွာ ဖေါ်ပြရမည်။ ကြည့်ရှု့သူများသွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး ကျမ်းစာပရောဂျက် အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန် www.bibleproject.com လင့်ခ်ကို ကြေညာချက်၌ ရှင်းလင်းထင်ရှားစွာထားရှိရမည်။
ဤခွင့်ပြုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ရုပ်သိမ်းခြင်း ဖြစ်ပျက်ပါက သင့်အနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်ပြသထားသော အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများနှင့် ထိတွေ့လို့ရသော မီဒီယာများအတွက်ပြန်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အခြားသောရုပ်ပြရုပ်ပုံများကိုပါ ဖယ်ရှားပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် နားထောင်လို့ရသည့် အသံဖိုင်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် နားထောင်လို့ရသည့် အသံဖိုင်များနှင့် အခြားအသံဖိုင်အကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ www.bibleproject.com ဆိုဒ်နှင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော အကြားအသံဖိုင်အမျိုးအစားများစွာကို လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ ("အသံအကြောင်းအရာ" ဟုစုစည်းခေါ်ဝေါ်) တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသံဖိုင်အကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ် သို့မဟုတ် Apple Podcast၊ Google Podcast နှင့် Spotify ကဲ့သို့ ခွင့်ပြုချက်ရ ဝန်ဆောင်မှုများ (သင်သည် ထိုခွင့်ပြုချက်ရ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ မည်သည့်လိုအပ်ချကိုမဆို လိုက်လျောနေသမျှကာလပတ်လုံး) မှနားထောင်ခွင့်ရှိသော်လည်း သင့်အား ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်၌ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသံဖိုင်အကြောင်းအရာများကို အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုခြင်းများကို ပြုလုပ်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မည်သည့် အသံဖိုင်အကြောင်းအရာကိုမဆို ခွင့်ပြုထားသည်ထက် ပိုပြီးအသုံးပြုလိုသော ဆန္ဒရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပြီး အထူးအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင် စီစဉ်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ရယူအသုံးပြုခြင်းသည် သင့်အား အခြားသော အကြောင်းအရာများကို ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ သတ်မှတ်ထားသော ခွင့်ပြုချက်ထက်ပို၍ ခွင့်ပြုထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရှေ့တွင်ပြဆိုထားသည့်အရာများကိုသာ ကန့်သတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များက တိတိကျကျခွင့်ပြုတားခြင်းမရှိပါက မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို အောက်ပါတို့ကို လုပ်ခွင့်မရှိပါ။
မည်သည့် မူပိုင်ခွင့်၊ အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတွင်မှတ်သားထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များ သို့မဟုတ် မည်သည့် ဒီဂျစ်တယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အား စီမံခန့်ခွဲသည့်လမ်းစဉ်၊ ကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြား အကြောင်းအရာ ကာကွယ်ခြင်းတို့အား တိုက်ရိုက်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြတ်လမ်းမှဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရှောင်ရှားခြင်း၊ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း သို့မဟုတ် တားဆီးခြင်းမပြုလုပ်ရ။
ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့် နည်းပညာ သို့မဟုတ် နည်းလမ်းထက်ပို၍ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏မည်သည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာကိုမျှ ပုံရိပ်ကူးယူခြင်း၊ ဘောင်ခတ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ခြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထဲထဲဝင်ဝင်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မပြူလုပ်ရ။
"စက်ရုပ်များ"၊ "ကွန်ရက်များ"၊ "အွန်းလိုင်းမသုံးပဲဖတ်သူများ" စသည့်တို့ပါဝင်သော
အလိုအလျောက်စနစ်မှတစ်ဆင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွဲ့စည်းထားသည့်အစိတ်အပိုင်းတွင် ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်သော သို့မဟုတ် အချိုးမကျစွာဖြင့် ကြီးမားသောဝန်တင်ခြင်းဖြစ်စေမည့် သို့မဟုတ် ဝန်ဖြစ်စေနိုင်မည့် (ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဉီးအမြင်ဖြင့် တိုင်းတာ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ) ဆောင်ရွက်အရေးယူခြင်း မပြုရ။
တရားမဝင်သော အချက်အလက်များ သိသိကြီးဖြင့် သို့မဟုတ် မဆင်မခြင် လိုင်းပေါ်တင်အပ်လုပ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ပိုးများ၊ ထရိုဂျန်ဟောစ့်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တာရာယ်ပြုနိုင်သော မဲလ်ဝဲလ်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အေးဂျင့်များနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုထိခိုက်သည်ဖြစ်စေ မထိခိုင်သည်ဖြစ်စေ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့စနစ် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်အတွင်းသို့ စမ်းသပ်ကလိခြင်း၊ ယိုယွင်းစေခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခံရစေခြင်း၊ စွန့်စားခြင်း သို့မဟုတ် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်း ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ရန် ကြံစည်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျမ်းစာပရောဂျက်၏ လုံခြုံရေးနှင့်စနစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်များအား ထိခိုက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် တစ်စုံတစ်ဉီး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်ခြင်း အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမျှ မပြုလုပ်ရ၊
ကာကွယ်ရန်ပြုလုပ်ထားသည့် အတားအဆီးများကို ဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ လုံခြုံစွာထားရှိသော သို့မဟုတ် အများသုံးနေရာမဟုတ်သောနေများကို ဟက်ခြင်း ကဲ့သို့သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ရယူမှု သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှု ကို ကန့်သတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် နေရာဒေသကိုကန့်သတ်ခြင်း နည်းလမ်းများကို တိမ်းရှောင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ၊
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုပြီး အကောင့်နာမည်များနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများအပါအဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစွာ ခွင့်ပြုစာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား စီးပွားရေးဆိုင်ရာရယူလိုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏မည်သည့်ကဏ္ဏကိုမဆို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး အသုံးပြုရန် ကြံစည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အခြေခံထားသည့် သို့မဟုတ် ထောက်ကူထားသည့် ကုဒ်အရင်းအမြစ် (ကရိယာများ၊ နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းလုပ်စဉ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသောအပိုင်းများအပါအဝင်) ကို ရှာခြင်း၊ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများကို အခမဲ့ သင်ပေးရန်ကြံရွယ်ထားသည်ဖြစ်စေ မကြံရွယ်သည်ဖြစ်စေ မည်သို့သော အကြောင်းအရာကိုမဆိုသုံးပြီး အရင်းအမြစ်အလုပ်များ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ ဖန်တီးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြစ်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏မည်သည့်ကဏ္ဏကိုမဆို အသုံးပြုပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
သင်သည် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှ မည်သည့်ပြဌာန်းချက်ကိုမဆို ဖောက်ဖျက်ခဲ့ပါက
ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည် ခွင့်ပြုချက်များမှ အလိုအလျောက် ထုတ်ပယ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ ရှင်းလင်းစွာခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပဲ အသုံးပြုခြင်းသည် မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ရာကျပြီး ကျမ်းစာပရောဂျက်၏ကြိုတင် စာဖြင့်ရေးသားထားသည့်ခွင့်ပြုချက်မပါရှိပဲ အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။
TBP သည် အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်ထားသောပစ္စည်းများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လက်ခံရန် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ထားလျှင် သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အများပြည်သူများ ရယူခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့် (အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်ထားသောပစ္စည်းများ) ထုတ်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထင်မြင်ချက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် အခြားသောအရာများ ပိုစ့်တင်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်မှ ပို့စ်တင်ထားသော အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သင်သည် (က) အကြောင်းအရာကို သင်ဖန်တီးခဲ့ပြီး ယင်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သင်ပိုင်သည် သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာကိုတင်ရန် သင့်တွင် ပိုင်ရှင်ဖော်ပြထားသည့်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်၊ (ခ) အကြောင်းအရာသည် အခြားတစ်စုံတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် (အကန့်သတ်မဲ့ မူပိုင်ခွင့်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပါအဝင်) အား ထိပါးခြင်းမရှိရပါ ။သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများ၊ ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ တင်ပြထားသော အခြားမူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိရပါ။ ထို့အပြင် အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်ထားသည်ပစ္စည်း လုပ်ဆောင်၍မရသည်မှာ
မှားနေသော၊ အသရေပျက်စေသော၊ သိက္ခာကျစေသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ နှောက်ယှက်သော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ နှိမ့်ချခွဲခြားဆက်ဆံသော၊ တစ်ယူသန်သော၊ အမုန်းပွားစေသော၊ ကြမ်းကြုတ်သော၊ ဘာသာရေးအားမထီမဲ့မြင်ပြုသော၊ ကာမရာဂစိတ်ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် အခြားသော စော်ကားပုတ်ခတ်သော၊ မသင့်လျော်သော၊ ထိခိုက်စေသော၊ ဥပဒေအရငြိစွန်းသော၊ ပြိုကွဲပျက်စီးစေတတ်သော သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်သော အရာများပါဝင်ခြင်း
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်ရှိ တရားမရေးရာ သို့မဟုတ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသော လုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုကို ထောက်ကူခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ကူညီခြင်းကို ပြုလုပ်သောပစ္စည်းများဖြင့် TBP၏ သို့မဟုတ် အခြားဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း
မည်သူ့ကိုမဆို အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆုံးရှုံးစေခြင်း သို့ ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း
အခြားသူများ၏ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ လူမှုရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာနံပါတ်၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပါဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား နောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အယောင်ဆောင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်စေမည့် အခြားသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပါဝင်ခြင်း
ကျမ်းစာပရောဂျက် ၏ မူပိုင်ခွင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်၊ မူပိုင်ခွင့်၊ စာချုပ် သို့မဟုတ် အခြားသော ဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် တို့အား ထိပါးခြင်း
မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကို ကလေးများအားပြခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမေးခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ကလေးများအား အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် အမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးစားခြင်း
သင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျမ်းစာပရောဂျက် အပါအဝင် မည်သည့်လူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှင့် မဆိုသင်၏ဆက်နွယ်မှုကို မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း
မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ အခြားသူများ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ အသုံးပြုသူနာမည်များ သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ကုဒ်များအား ရယူစုဆောင်းရန် ကြိုးစားခြင်း
အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ စာများအဆက်လိုက်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ များပြားသော သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်မရှိသောစာများကို ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အနှောက်အယှက်ပေးခြင်း၊ ဖြိုခွဲခြင်း သို့မဟုတ် TBP သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တွင် လွန်ကဲသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုဖန်တီးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာများ သို့မဟုတ် ကရိယာများ သို့မဟုတ် ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကွန်ပျူတာများ သို့မဟုတ် ကရိယာများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော စပိုင်ဝဲလ်၊ မဲလ်ဝဲလ် သို့မဟုတ် အခြား ကွန်ပျူတာကုဒ်များကို သွင်းရန် သို့မဟုတ် ထောက်ကူပေးရန် ကြိုးစားခြင်း
ပြိုင်ပွဲများ၊ မဲများ သို့မဟုတ် အခြား အရောင်းပရိုမိုရှင်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်းများ၊ ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် လျော့ဈေးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်း ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ
တစ်နည်းအားဖြင့် TBP ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရ လက်မခံနိုင်သော သို့မဟုတ် ကလေးများနှင့်မသင့်လျှော်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သင်တင်သောပို့စ်နှင့် အခြားသူအား သင်ပေးသော အချက်အလက်များကို သေချာဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပါ။ TBP သည် သင့် နာမည်အပြည့်အစုံ၊ ဖုန်းနံပတ်၊ လမ်းလိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ သို့မဟုတ် သင့်အား သိစေသော အခြားအချက်အလက်များကို အများမြင်သာစွာ ပိုစ့်တင်ခြင်းကို သို့မဟုတ် သူစိမ်းများကို သင့်အားရှာဖွေတွေ့ရှိစေမည့် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးအချက် ခိုးယူ၍သင်ကဲ့သို့ပြုမူစေနိုင်မည့် ပို့စ်တင်ခြင်းကို အားမပေးပါ။ သင်၏ အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းနှင့် ၎င်းတို့အား အွန်လိုင်းပေါ်တင်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များသည် သင်တစ်ဦးတည်း၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိတွေ့လာရသည့် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ဆက်နွယ်လျက် ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်အားလုံးကို သင်တာဝန်ယူရသည်။ ထို့အပြင် ဥပဒေက ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအရ သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် သင်တင်ထားသည့် အသုံးပြုထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ယူရခြင်းသာမက အခြားအသုံးပြုသူများ၏ စီမံမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းများကို ကျွနု်ပ်တို့တာဝန်ယူရခြင်းမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းအား တာဝန်ယူခြင်းမဟုတ်ပဲ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပယ်ချခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆို အကြောင်းကြားစရာမလိုဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်နှင့်အခြားအသုံးပြုသူအကြားဖြစ်ပွါးသည့် အငြင်းပွားခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် သင်၏ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူ၏ လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မလုပ်ဆောင်ခြင်းများ ကြောင့်ဖြစ်လာသောအငြင်းပွားခြင်းများ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန် မရှိပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်၏ပြုမူပုံနှင့် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်သင့် ၏ဆက်ဆံတုံ့ပြန်မှုများအတွက် သင်တစ်ဦးတည်းတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းသည် ဤအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်မခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းရှိသည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ယုံကြည်ပါက အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းအား မည်သည့်အချိန်မဆို၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆို အသိပေးခြင်းမရှိပဲ ငြင်းဆိုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းများကို ကျွနု်ပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှ ထောက်ပံ့ကြော်ငြာခြင်းမရှိသလို အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကို ပို့စ်တင်ခြင်းက ကျွနု်ပ်တို့၏ အမြင်၊ ရှုထောင့် သို့မဟုတ် အကြံများကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သင် သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် ကြားခံအဖွဲ့အစည်းမှ အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းအားဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ယူခြင်းနှင့် လျော်ပေးရန်တာဝန်ခံခြင်း မရှိပါ။ မည်သည့် အသုံးပြုသူမဆိုထံမှ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လည်း ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိကြောင်း ယူဆပါသည်။
သင့်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ရန်ကြိုးစားခြင်း မပြုလုပ်ရန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ပါသည်။
သင့်အတွက်ဟု မရည်ရွယ်ဘဲ အချက်အလက်များရယူခြင်း သို့မဟုတ် ဆာဗာအတွင်းသို့ဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုခွင့်မရှိသည့်အကောင့်ဖြင့် ဝင်ခြင်း
ကျွနု်ပ်တို့သည် သင့်အားပြုလုပ်ခွင့်ကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ထားသည့်ရေးသားချက် မရှိဘဲ စနစ် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်၏ အားနည်းချက်ကို စူးစမ်းရန်၊ အနှံ့ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား တိုင်းတာခြင်းတို့အား ချိုးဖျက်ခြင်း
ဗိုင်းရပ်စ်ထည့်ခြင်း၊ လွန်ကဲစွာသုံးစွဲခြင်း၊ ပြည့်လျှံစေခြင်း၊ မလိုအပ်သည်များကိုပေးပို့ခြင်း၊ မေးလ်အများအပြားပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေခြင်း ကဲ့သို့သော အခြားသုံးစွဲသူ၊ အိမ်ရှင်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကွန်ယက်တို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာများကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ်
TCP/IP အထုတ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပရိုမိုးရှင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် မည်သည့် အီးမေးလ်တွင်မဆိုပါသော ခေါင်းစဉ်အချက်အလက် အပိုင်းအစများ သို့မဟုတ် သတင်းအဖွဲ့ ပို့စ်တင်ခြင်းများပါဝင်သည့် မလိုလားအပ်သော အီးမေးလ်ပို့ခြင်း
သင်သည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းများတွင် မည်သည့်စက်ပစ္စည်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ် သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ရန်လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့ပေးထားသော search engine သို့မဟုတ် search agentများနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်သော ကြားခံအဖွဲ့အစည်း၏ ဝက်ဘ် browser များဖြစ်သည့် Chrome၊ Firefox၊ Safari သို့မဟုတ် Edge တို့ထက်ပိုပြီး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား လမ်းညွှန်ရန် သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန်အတွက် မည်သည့် အင်ဂျင်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ကရိယာ၊ အေးဂျင့် သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် နည်းလမ်းများကို (browsers၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်ပြီးအချက်အလက်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ စက်ရုပ်များ၊ ပုံများ သို့မဟုတ် ဉာဏ်ပြေးသော အေးဂျင့်များအပါအဝင်) အသုံးမပြုရန် ထပ်မံသဘောတူသည်။
သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏စနစ် သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကွန်ယက်များကို ချိုးဖောက်ပါက သင်သည် တရားမမှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိခြင်းတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါချိုးဖောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များအား ကျွနု်ပ်တို့ဖက်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ချိုးဖောက်ခြင်းတွင်ပါဝင်သောအသုံးပြုသူများအား တရားစွဲခြင်းအတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဌာန်းထားသည့် အာဏာပိုင်များနှင့်အတူ ကျွနု်ပ်တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည့် အင်္ဂါရပ်များ ထပ်ထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အချို့အားဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ပစ်ခြင်း တို့အပါအဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏မည်သည့် ကဏ္ဏတွင်မဆို မည်သည့်အချိန်ဖြစ်စေ မကြာခဏဖြစ်စေ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်မလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အား တာဝန်ယူခြင်းမရှိ သို့မဟုတ် အသိပေးခြင်းမရှိ ကျွနု်ပ်တို့တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အချို့ သို့မဟုတ် အကုန်လုံးအား ရယူအသုံးပြုခြင်းမှ ရံဖန်ရံခါ တားမြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့တွင် သင့်အကောင့်အား မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဖြစ်စေ၊ အသိပေးကြေညာခြင်းမရှိဘဲ သို့မဟုတ် တာဝန်ယူခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်နားထားခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ရယူခြင်းကို ကန့်သတ်ခြင်းများအား ကျွနု်ပ်တို့၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့နှင့်အညီ မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်မဆို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် ၄င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် မည်သည့်အချိန်နှင့် မည်သည့်ကာလတွင်မဆို သင် အသုံးပြု၍မရခြင်း ဖြစ်လာတတ်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် သင့်အကောင့်အား ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အင်္ဂါရပ်များကို ရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်အသုံးမပြုစေခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် သင့်အား အချက်အလက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ ပေးရန်ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သင့်အကောင့်ထဲ၌ သို့မဟုတ် ၄င်းနှင့် ဆက်သွယ်ထားခြင်းဖြင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ၄င်း၌သိမ်းထားသော သင်၏အခြားနှစ်သက်သောအရာများနှင့် စိတ်ဝင်စားသောအရာများကိုလည်း ဖျက်ပစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သင်၏အချက်အလက်အား သင်မည်မျှ တန်ဖိုးသတ်မှတ်စေကာမူ ဖျက်ပစ်ရာတွင် ၄င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ဆောင်ရန် အခြားအရင်းအမြစ်သင့်တွင် မရှိပါ။ ထို့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့ဆာဗာများတွင် သိမ်းဆည်းထားသော တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ထားသည့် သင်၏မည်သည့်အချက်အလက်များကိုမဆို ကျွနု်ပ်တို့နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက် သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက်ကို ဖတ်ရှုပြီး၊ နားလည်ပြီးကြောင်း သလက်ခံသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက်ကို အချိန်မရွေး သင် ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်သည်။
အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု သဘောတူခွင့်ပြုချက် သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ထံမှ အီလက်ထရောနစ်ဖြင့် ဆက်သွယ်မှုလုပ်ခြင်းအတွက် အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ကြေညာခြင်း သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့တစ်ဦးတည်း၏အမြင်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော အခြားသော အီလက်ထရောနစ်ပုံစံများဖြင့်ပေးပို့ခြင်းတို့အား လက်ခံရန် သဘောတူခွင့်ပြုသည်။ လိုအပ်သည့်ကြေညာချက်၊ ထုတ်ဖော်ချက်၊ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့သော ရေးသားထားအခြားသောဆက်သွယ်မှုများကို ကျွနု်ပ်တို့ဖက်မှ သင့်အား ပေးပို့ခြင်းကို သင်သဘောတူညီသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ထိုအီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ခြင်းများကို သင် သို့မဟုတ် သင်၏ကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ အလိုအလျောက် စစ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးခြင်းတို့အတွက် ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။
ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် သင််အချက်အလက်များ ကိုရယူခြင်း သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အတွက် အမည်စာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြင်း ပြုလုပ်သောအခါ သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အား ကြားခံအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် စုဆောင်းထားသည့် သင်၏ အချက်အလက်များအား ရယူအသုံးပြုခွင့်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- သင်သည် သင်၏ Facebook အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက ယင်းအကောင့်များမှတစ်ဆင့် ကျွနု်ပ်တို့အား သင်၏အချက်အလက်များကို ရယူခွင့်ပြုသည်။ (နာမည်အပြည့်အစုံနှင့် အီးမေးလ်ကဲ့သို့သော) ယင်း ဝန်ဆောင်မှုများမှ ကျွနု်ပ်တို့ရရှိသည့် သင်၏အချက်အလက်များသည် သင်၏ အကောင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ခြင်းဆိုင်ရာကြေညာချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏အကောင့်သတ်မှတ်ချက်အား သေချာစစ်ဆေးပါ။
ကျမ်းစာပရောဂျက်သည် အမေရိကန်ရှိ ၎င်း၏ရုံးများမှ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သည်။ ဤနေရာတွင်ပါရှိသော ပစ္စည်းများအပါအဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသောတောင်းဆိုချက်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၏ ဥပဒေများအရ ကိုင်တွယ်သည်။ သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား အခြားနေရာမှ အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်လျှင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်သဘောဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုသာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာခြင်းရန်မှာ သင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာပရောဂျက်သည် ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ၎င်းအကြောင်းအရာများ "လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအရာများ" ကိုသာ အခြေခံ၍ တင်ပြပြီး မည်သည့်အရာကိုမှ ကိုယ်စားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အကန့်သတ်မဲ့ အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် ခေါင်းစီးတစ်ခု၏ အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အာမခံမှုများအား သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ထားနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကိုက်ညီခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာအား ထိပါးမှုမရှိခြင်း အပါအဝင် မည်သည့်အတွက်မှ အာမခံခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုခြင်းမရှိခြင်းပါ။ TBP သည် အကြောင်းအရာများသည် တိကျသည်၊ ပြီးပြည့်စုံသည် သို့မဟုတ် လက်ရှိအတိုင်းဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်သော်လည်း TBP သည် ၄င်း၏ဆိုဒ်များတွင် ရယူနိုင်သော အချက်အလက်များသည် တိကျသည်၊ ပြီးပြည့်စုံသည် သို့မဟုတ် လက်ရှိအတိုင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံခြင်း မရှိပါ။ TBP သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အမြဲရရှိနိုင်မှုအား အာမခံမှု မပေးနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ်အားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တိကျသော ရလဒ်တစ်ခုခုရနိုင်သည်ဟု ကတိမပေးပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် စွန့်စားခြင်းဖြင့်သာ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆိုဒ်များကို သင် အသုံးပြုရသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် အကန့်အသတ်မရှိ ကျွနု်ပ်တို့ ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် တင်လိုက်သောအကြာင်းအရာများ၏ တိကျမှုအပြင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး တာဝန်မရှိဘဲ ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ မည်သည့်အကြောင်းအရာတွင်မဆို ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် ကရိယာများ သို့မဟုတ် ပရိုဂမ်းမင်းမှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ်မှ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အာမခံခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုခြင်းတို့အတွက် ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့ ၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော လင့်ခ်များပါဝင်နိုင်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့သည် အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ၊ တိချမှုနှင့် အမြင်များအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ထို့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များရှိ တိကျမှုရှိခြင်းနှင့် ပြီးပြည်စုံမှုရှိခြင်းတို့အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်စစ်ခြင်းပြုလုပ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် လင့်ခ်မဆိုပါဝင်ခြင်းသည် ယင်းချိတ်ဆက်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ကျွနု်ပ်တို့၏ ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံကြော်ငြာပေးခြင်းတို့အား ညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကြားခံအဖွဲ့အစည်းဆိုဒ်များအား ရယူအသုံးပြုခြင်းသည် သင်၏ကိုယ်ပိုင် စွန့်စားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် တင်ထားသော ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် ကျွနု်ပ်တို့ တာဝန်ယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ထိုကြော်ငြာများ၏ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လည်း ကျွနု်ပ်တို့မှ တာဝန်ယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့ဆိုဒ်တွင်တင်ထားသော အကြောင်းအရာအပါအဝင် ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသူများ၏ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ထိန်ချန်ခြင်းများ (အွန်လိုင်းရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ) များအတွက် ကျွနု်ပ်တို့ဖက်မှ တာဝန်ယူသွားမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့် အမှား၊ ထိန်ချန်ခြင်း၊ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်မှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အဆက်အသွယ်လိုင်းများပြတ်တောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူများ၏ အဆက်အသွယ်ကို ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခံရခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန် မယူပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ် သို့မဟုတ် သင်၏အသုံးပြုခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး (ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက် သို့မဟုတ် လိုင်းများ၊ ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းစနစ်၊ ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော မဲလ်ဝဲလ်၊ ဆာဗာများသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ကွန်ပျူတာ ကရိယာများ၊ ဆော့်ဖ်ဝဲလ်၊ နည်းပညာပြဿနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အီးမေးလ်ပို့မရခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးများခြင်းကြောင့် အင်တာနက် နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ဆိုဒ်များတွင် ပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ခြင်းတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောအရာများ အပါအဝင်) ဖြစ်လာသောပြဿနာများ၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့အတွက် ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ် ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်၊ အခြားအသုံးပြုသူများ၏ အပြုအမူ (လိုင်းရှိချိန်ဖြစ်စေ မရှိချိန်ဖြစ်စေ) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်း အပါအဝင် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း တို့အတွက် ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆိုဒ်ကို သုံးစွဲခြင်း (မသုံးစွဲနိုင် ခြင်း) မှရလာသည့် သင်၏ကွန်ပြူတာ၊ ဆော့ဝဲ၊ မိုဒမ်၊ တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ် အခြားပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းအတွက် ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ်များမှတစ်ဆင့် အချက်အလက်များကို သင် မရယူနိုင်ခဲ့လျှင် သင့်အတွက် ကျွနု်ပ်တို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် မဟုတ်ပါ။ အချို့ပြည်နယ်များတွင် အချို့သော အာမခံများနှင့်/ သို့မဟုတ် တာဝန်ယူရခြင်းအား ချန်လှပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့် အချို့သော အထက်ပါ ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ချန်လှပ်ထားခြင်းများသည် သင့်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသည့် အရာ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဥပမာဖြစ်သောအရာအပါအဝင် သင် သို့မဟုတ် သင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အခြားသူက ကျွနု်ပ်တို့၏ဆိုဒ်ကို သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စရပ်အတွက် ကျမ်းစာပရောဂျက် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ပစ္စည်းရောင်းချသူများ သို့မဟုတ် ကြားခံအဖွဲ့အစည်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ တာဝန်ယူပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းမရှိ အသုံးပြုမှု၊ အချက်အလက်၊ အကျိုးအမြတ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းနာမည်ကောင်း ဆုံးရှုံးခြင်းအပါအဝင် အကျိုးဆက်များမှဖြစ်လာသည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ သို့မဟုတ် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်လာသော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၊ စီးပွားရေးတန့်သွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်ဆောင်တော့ခြင်း၊ အကန့်အသတ်မရှိ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံနှင့်မှ မစပ်လျဉ်းပဲ စာချုပ်၊ ကန့်သတ်ထားသော တာဝန်များ၊ လျစ်လျုရှုခြင်း၊ သို့မဟုတ် နှိပ်စက်သည့် အခြား လုပ်ရပ်များအပါအဝင် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းမှ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ အသုံးပြု၍မရခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာသောအရာများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို သုံးစွဲ၊ ကူးယူ၊ ပြသ၍မရခြင်း ဤကန့်သတ်ချက်များသည် အကန့်အသတ်မရှိ စာချုပ်ချိုးဖောက်ခြင်း၊ အာမခံချိုးဖောက်ခြင်း၊ တင်းကြပ်စွာတာဝန်ယူခြင်း၊ မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း၊ ပစ္စည်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်း (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပါ)၊ လျစ်လျုရှုခြင်း သိလျက်နှင့် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ခြင်းအပါအဝင် မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများမဆိုနှင့် အလားတူ ကြားခံအဖွဲ့အစည်း၏တောင်းခံမှုများတွင်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ရှေ့တွင်ပြခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်ပေးချက်အရ ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပဲ ကျမ်းစာပရောဂျက်က သင် သို့မဟုတ် အခြားမည်သူမဆို၏ တောင်းဆိုအပေါ် တင်ရှိသည့် စုပေါင်းတာဝန် ဝတ္တရားရှိခြင်းသည် ၁၂ လအတွင်း ကျမ်းစာပရောဂျက်ထံ သင်ပေးချေခဲ့သော အမြင့်ဆုံးပမာဏအထိဟု ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့၊ ကျွနု်ပ်တို့ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများနှင့် ကျွနု်ပ်တို့နှင့်နှီးနွယ်ပတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ အေးဂျင့်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုက်ဖက်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအား (၁) ကျွနု်ပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း အသုံးပြုခြင်း၊ (၂) ကျွနု်ပ်တို့၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ (၃) ကျွနု်ပ်တို့ သတ်မှတ်ချက်များ၌ဖေါ်ပြထားသည့် သင်၏ကိုယ်စားပြုခြင်းများနှင့် အာမခံများ ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ တာဝန်ယူရမှု၊ ကျသင့်ငွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ လျော်ကြေး၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုချက်များ၊ အကန့်အသတ်မရှိပါဝင်သော ရှေ့နေစရိတ်များ၊ အချိန်ကာလစေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ခြင်းများအတွက် အာမခံခြင်းနှင့် ထိန်းထားခြင်းကို သဘောတူညီသည်။
ကျမ်းစာပရောဂျက်သည် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲ ပိုစ့်တင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆို သင့်အား ကြိုတင်အသိပေးခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မရှိသည်ဖြစ်စေ အချိန်မရွေး ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဤသို့ ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များပြောင်းလဲခြင်းသည် ယခင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်တွင် အစားထိုးပြီး ဤစာမျက်နှာတွင်တင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်သဘောတူသည့် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ မည်သည့်အပိုင်းကိုမဆို အကောင်အထည်ဖေါ်၍မရကြောင်း တွေ့ရှိပါက ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် အာဏာအပြည့်အဝတည်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆက်ရှိသည်။ ထိုအကောင်အထည်ဖေါ်၍မရနိုင်သောအပိုင်းသည် ဥပဒေအတိုင်းအတာတစ်ခုအရ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြီးနောက် တည်တံ့နိုင်သည်။ သင်သည် ထိုကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ချက်များအားလုံးကို လိုက်နာရန် သဘောတူညီသည်။ လက်ရှိ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သိနိုင်ရန် ၄င်းတို့ကိုတင်ထားသည့် စာမျက်နှာသို့ အခါအားလျော်စွာ ပုံမှန် သွားရောက် ကြည့်ရှုရန် သင့်အား အကြံပြုလိုပါသည်။
သင်သည် ကျမ်းစာပရောဂျက် အားဆန့်ကျင်ပြီး မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများ၊ အငြင်းပွားမှုများ သို့မဟုတ် မကျေနပ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အုပ်စုလိုက်တရားစွဲဆိုခြင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ဤနေရာတွင် စွန့်လွှတ်သည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်သောနေရာတွင် သင်သည် ကျမ်းစာပရောဂျက် အားဆန့်ကျင်သည် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်မဆို မပါဝင်ရန်ဤနေရာတွင် ရွေးချယ်သည်။
မှတ်ချက်- ခုံသမာဓိ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း သဘောတူညီချက်သည် အမေရိကန်တွင် အသုံးပြုများအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။
သင်နှင့် TBP သည် တရားရုံးတွင် သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ရှေ့တွင် ဥပဒေဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များပြုလုပ်ခွင့် သို့မဟုတ် အဖွဲ့လိုက်တရားစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုတွင် ပါဝင်ခွင့်များကို စွန့်လွှတ်ရန် သဘောတူညီကြသည်။ သင်သည် တရားရုံးသို့သွားခဲ့ပါလျှင် ရရှိနိုင်သည့် ရှာဖွေခွင့်ရယူခြင်း ကဲ့သို့သော သင့်တွင်ရှိသည့် အခြားလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုလည်း မရရှိနိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ် ၄င်းတို့ကိုခုံသမာဓိဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် ကန့်သတ်နိုင် သည်။
ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် ၄င်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှု သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းရှိခြင်းဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများပါဝင်သော ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဆက်ဆံရေးများ ဤ တရားစီရင်းခြင်းစည်းကမ်းချက်များ၏ အကျုံးဝင်သည့်နယ်ပယ် သို့မဟုတ် တည်တံ့မှု ("အငြင်းပွားမှုများကို ဖုံးကွယ်ခြင်း" ဟု ပေါင်းစည်းခေါ်ဆိုခြင်း) ကို တရားရုံးတွင် မဆုံးဖြတ်ဘဲ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ပေါ့လန်မြို့ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူသောနေရာတွင် ကျင်းပသည့် တစ်ဦးချင်းနှင့်ဆိုင်သော တည်တံ့သည့်တရားစီရင်ခြင်းဖြင့်သီးသန့် ကျေအေးနိုင်ပါသည်။ ဤခုံသမာဓိ တရားစီရင်ခြင်းကို အမေရိကန် တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်း (AAA) က ၎င်း၏စည်းမျဉ်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ် တရားစီရင်ခြင်းအက်ဥပဒေသည် တရားစီရင်ခြင်း သဘောတူညီချက်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့် တည်တံ့စေခြင်းအပေါ် အုပ်စိုးနေသည်။ တခြားတစ်ဖက်တွင် သင်၏တောင်းဆိုချက်သည် ဘောင်ဝင်ပြီး အဆိုပါကိစ္စသည်လည်း ထိုတရားရုံးတွင် တည်ရှိနေလျက် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်သာ ဖြစ်နေသရွေ့ (အဖွဲ့လိုက်တရားစွဲခြင်း မဟုတ်၊ ကိုယ်စားပြုတရားစွဲခြင်း မဟုတ်) သင်သည် ၄င်းကို သေးငယ်သောတောင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် အခိုင်အမာ တောင်းဆိုနိုင်သည်။
တရားစီရင်ချင်းကိုတစ်ခုခုကို အဦးပြုစတင်ခြင်း မလုပ်မီတွင် စတင်တရားစွဲသည့်အဖွဲ့သည် အခြားအဖွဲ့အား အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြိုတင်ပြီး တရားစွဲရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကို စာဖြင့်ရေးသားအသိပေးရမည်။ TBP သည် ထိုကဲ့သို့သော အကြောင်းကြားစာကို ကျွနု်ပ်တို့၏ဖိုင်တွဲ၌ရှိသောသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ အီးမေးလ်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ဖက်မှလည်း webmaster@jointhebibleproject.com သို့ ဤကဲ့သို့ အကြောင်းကြားစာကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ရမည်။ ထိုကဲ့သို့ ရက်ပေါင်း ၆၀ အကြောင်းကြားခြင်း ကာလအတွင်း၌ အဖွဲ့များသည် ချစ်ကြည်စွာဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အကျုံးဝင်သည့် အငြင်းပွားမှုများအား ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ ထို ချစ်ကြည်စွာဖြေရှင်းမှု မအောင်ခြင်းနှင့် အကြောင်းကြားသော အချိန်ကုန်သွားခြင်းဖြစ်လျှင် နှစ်ဖက်တွင်တစ်ဖက်မှ စတင်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
ခုံသမာဓိသည် ဥပဒေအောက်တွင် ရှိသည့်မည်သည့်သက်သာခွင့်ပေးငွေကိုမဆို သို့မဟုတ် ရှယ်ယာတန်ဖိုးကို ပေးပိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိလျက် ခုံသမာဓိက ဆုံးဖြတ်ပေးသောချီးမြှင့်မှုသည် နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးမှ ဥပဒေအကြောင်းအရ လိုက်နာရသည်။ ခုံသမာဓိမှ ချီးမြှင့်သည့် စီရင်ချက်ချမှုကို ဥပဒေကြောင်းအရရပ်တည်မှုရှိသည့် မည်သည့်တရားရုံးတွင်မဆို အပြီးသတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရှေ့တွင် အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ခြင်း တာဝန်များကို ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးသည် အချိန်မရွေး ဥပဒေကြောင်းအရရပ်တည်မှုရှိသည့် မည်သည့်တရားရုံးတွင်မဆို တရားရုံးမှအမိန့်စာ သို့မဟုတ် အခြားတရားမျှတသောငွေပေးခြင်းကို ရရှိရန် တရားစီရင်မှုပြီးမြောက်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ခုံသမာဓိသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ပြဌာန်းချက်အတိုင်း ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သိုကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအား တရားစီခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျော်လွန်ခြင်းဟု သတ်မှတ်ရပြီး တရားရုံးမှပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ရသည်။ TBP နှင့် သင်သည် အကျုံးဝင်သည့်ငြင်းပွားမှုများကို အဖွဲ့လိုက်တရားစွဲခြင်း၊ ကိုယ်စားပြုတရားစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေဆောင်ရွက်မှုအရ တရားစွဲခြင်းများကို လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ခုံသမာဓိသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အဖွဲမလိုက်တရားစွဲမှု ၊ ကိုယ်စားပြုတရားစွဲမှု သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေဆောင်ရွက်မှုတို့အပေါ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုရန် အာဏာမရှိပါ။ ဤအပိုင်းရှိ သဘောတူညီချက်၏ မည်သည့်ပြဌာန်းချက်မဆို တရားစီရင်ရန် တရားမဝင်ကြောင်း သို့ မတည်တံ့ကြောင်း တွေ့ရှိလျှင်လည်း ကျန်ရှိနေသည့်တရားစီရင်ခြင်း သတ်မှတ်ချက်များသည် လုံဝဥဿုံ တရားဝင်ခြင်း၊ တရားဝင်တာဝန်ခံခြင်းနှင့် တည်တံ့ခြင်းတို့ ဆက်ရှိနေသည်။ (သို့သော် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို အဖွဲ့လိုက်တရားစွဲမှု၊ ကိုယ်စားပြုတရားစွဲမှု သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေ၏အထွေထွေ တရားစီရင်ခြင်းတို့ ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ) ထိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသောရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းမှုများသည် ဖက်ဒရယ်တရားစီရင်ခြင်းအက်ဥပဒေ9U.S.C. sec. 1-16 (FAA) နှင့် အော်ရီဂိုပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၏အောက်တွင်ရှိပြီး အခြားအကျုံးဝင်မှုမရှိပါက ၄င်းဥပဒေအရ အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ ဗီဒီယိုများနဲ့ သတင်းအချက်အလက်များနဲ့ အဆက်မပြတ်စေဖို့ newsletter ကိုရယူပါ။
သမ္မာကျမ်းစာကို သခင်ယေရှုထံပို့ဆောင်ပေးသည့် တစ်စုတစ်စည်းတည်းသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်အဖြစ် လူများ ကြုံတွေ့လေ့လာနိုင်ရန်